Shirkii Dhuusamareeb oo goor dhaw furmaya | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii Dhuusamareeb oo goor dhaw furmaya
Waxaa socota qaban-qaabada Shirkii Dhuusamareeb 4 oo lagu wado inuu furmo maanta, kaddib markii uu dib uga dhacay xilligii loo asteeyay markiisii hore in uu qabsoomo.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Dowlad goboleedka Galmudug oo la filayo in uu maanta ka furmo Shirkii Wadatashiga Dhuusamareeb 4 kaas oo looga hadlayo khilaafka ka taagan doorashada dalka.
Shirka oo sidii horay loo qorsheeyay aha inuu furmo 1-dii bishaan ayaa dib uga dhacay laba maalin sababo la xiriira madaxdii ka qeyb gali lahayd shirka oo aan soo gaarin magaalada Dhuusamareeb, Xalay ayey dowladdu war ka soo saartay, waxaana wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya uu sheegay inuu baaqday shirka oo lagu waday inuu furmo, waxaana lagu dhawaaqay inuu furmayo maanta oo ay taariikhdu tahay 3-da Febaraayo oo ahayd maalintii lasoo gaba gabeyn lahaa shirka.
Shirkaan oo ay ka qeyb galayaan madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa looga hadli doona ismari-waaga ka taagan arrimaha doorashada la filayo dalka in ay ka dhacdo sanadkaan.
Waxaa la dareemayaa inuu jiro caga-jiid iyo kala shaki hor leh, taasoo xumeynaysa saadaasha laga filan karo shirka, magaalada Dhuusamareeb waxaa ka socda shirar gooni gooni ah oo ay yeelanayaan madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyad qaar.